Maraykanka iyo Ruushka oo ay ka dhex tafantay + Sababta? |
Maraykanka iyo Ruushka oo ay ka dhex tafantay + Sababta?
Dowlada Ruushka ayaa dalkeeda ka eriday labo diblumaasi ooka shaqeynaysay safaarada Maraykanka ee magaalada Moscow kadib markii Aqalka cad ee Maraykanka uu amray in dalka Maraykanka ka baxaan labo diblumaasi oo Ruush ah.
Jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa wasaarada arrimaha dibada Maraykanka waxa ay sheegtay in arrinta eryida diblumaasiyiinta Ruushka ay ka dambeysay kadib markii askari Boolis ah oo Ruush ah uu ku weeraray diblumaasi Maraykan ah meel ku dhow safaarada Maraykanka ee Moscow. Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa dhinaca kale ku eedeeyay in ay ahaayeen basaasiin ka tirsan CIA.
Wasiir ku xigeenka Wasaarada Arrimaha Dibada Ruushka Sergei Ryabkov ayaa ku macneeyay sababaha diblumaasiyiinta Maraykanka loo eryay in tahay iyagoo aan howlaha diblumaasiyada ku lug lahayn labada diblumaasi ee la eryay.
Afhayeen u hadlay Wasaarada Arrimaha Dibada Maraykanka John Kirby ayaa dhinaca kale sheegay in diblumaasiyiinta Ruushka bartimihii bishii hore lagu wargeliyay inay isaga tagaan dalka Maraykanka.
Mr Kirby ayaa sheegay in horaantii bishii June diblumaasi Maraykan ah uu weeraray askari Ruush ah kaaso jirdil ku sameeyay diblumasiga. Hase yeeshee dowlada Ruushka ayaa beenisay inay ciidamadeeda wax jir dil ah u geysteen diblumaasiga.